Zvicherwa neSarudzo Zvinokurukurwa muWashington paHurukuro dzeGlobal Press Institute
Vamwe vevakapinda muhurukuro dzakarongwa neGlobal Press muWashington D.C.
Sangano reGlobal Press nemusi weChina muWashington D.C., rakakokera hurukuro dzakanangana neZimbabwe munyaya dzekucherwa zviri kunze kwemutemo kwezviwanikwa nemakorokoza, pamwe nesarudzo, idzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino.
Hurukuro idzi, idzo dzaive pasi pechirongwa cheGlobal Press Influencer Series, dzakaitirwa paNewseum, pasi pedingindira rekuti “Zimbabweans Take Action”, kana kuti “Vana veZimbabwe Torai Matanho”, uye dzaitsigirwa nemasangano anosanganisira reNewseum Institute, neMetropolitan Group.
Vakataura pamusangano uyu vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy Inc., VaCharles Mutama, Muzvare Wadzanayi Mhute veNew York Times, Muzvare Linda Mujuru veGlobal Press Journal, naMuzvare Cristina Maria Villegas, vanove mukuru anoona nezvezvicherwa musangano rakazvimirira rePACT.
Muzvare Villegas vakati munyika dzese dzavakafamba pasi rose, Zimbabwe ndiyo ine zvicherwa zvakawanda asi zvisina anochengetedza nenzira dzingaite kuti zvibatsire veruzhinji.
Panyaya yesarudzo, vatauri vose ava vakawirirana kuti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vanogona kukunda musarudzo idzi, vachiti dzichabiridzirwa pachishandiswa mauto.
Vatauri ava vakatiwo kunyangwe mapato anopikisa akakunda, havaoni achipiwa mukana wekutonga.
Muzvare Mujuru vakati vanoona sekunge VaMnangagwa vachakunda musarudzo, sezvo pasina vanopikisa vakasimba, uye pachiratidza sepasina gwara chairo mumapato anopikisa.
Hurukuro naLinda Mujuru